UGoogle ubonelela ngesikhokelo esitsha soYilo lweZinto | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Idizayini yeMifanekiso, Uyilo lwewebhu
material Design Lulwimi loyilo olwalukho idityaniswe okokuqala kwiminyaka emibini edlulileyo kuhlaziyo lwe-Android olwaziwa njengeLollipop. Ulwimi olucebisa imibala ethe tyaba kunye ocacileyo kunye oopopayi abathile abakwazileyo ukuthatha le OS kwizixhobo eziphathwayo bazise kwelinye inqanaba.
Kwiintsuku ezidlulileyo, izikhokelo zoyilo ezintsha ukuba, phakathi kwezinye iingcebiso, inikezela ukucaciswa okwaneleyo ngokubaluleka kwe "Motion", njengoko iguqulelwe kolu lwimi loyilo kwaye yenza utshintsho lube nomgangatho obonakalayo obonakalayo.
"Isindululo" kwihlabathi loyilo lwezixhobo liguqulela njenge indlela yokuchaza ubudlelwane kwizithuba, ukusebenza kunye nenjongo ngobuhle kunye nobushushu. Ukwazi intsingiselo yalo sinokuqhubeka nokwazi ukubaluleka kwayo.
"Isindululo" sibonisa indlela isicelo esilungelelaniswe ngayo kunye nento enokuyenza. Nika imikhondo kwinto enokwenzeka ukuba umsebenzisi ugqibezela isenzo, ubudlelwane besithuba kunye nolawulo phakathi kwezinto ezahlukeneyo kunye nomlinganiswa.
UGoogle ucacisa ukuba uyilo lweMathiriyeli lubonelela ngendawo ethweleyo ukuphefumlelwa ngamandla oqobo endalo, Njengomxhuzulane kunye nokuxubana. Le mikhosi ibonakaliswe kwindlela isenzo somsebenzisi esichaphazela ngayo izinto ezikwisikrini okanye indlela abasabela ngayo omnye komnye.
Izinto eziphathekayo unamandla kwaye uyaphendula kwizenzo umsebenzisi ngokuchanekileyo; ilingisa intshukumo yemvelo yemikhosi efana naleyo yomxhuzulane efumaneka kwilizwe lokwenyani; kwaye ujonge kwinto eyenzekayo macala onke, ebandakanya umsebenzisi ngokwakhe kunye nezinye izinto eziMjikelezileyo, ezinokuvelisa umtsalane kwizinto kwaye ziphendule ngokufanelekileyo.
UGoogle ukwachaza into eyenza utshintsho olunomgangatho ophezulu. Unxibelelwano akufuneki ligcine umsebenzisi elinde ixesha elide kunokuba kufanelekile, utshintsho kufuneka icace kwaye ingaguquguquki kwaye izinto zeMathiriyeli mazimanyaniswe sisantya, impendulo kunye nenjongo yazo.
Ukusuka kwiwebhusayithi uqobo, Uphando bonisa imizekelo ecacileyo kwezo zikhokelo zoyilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Isikhokelo esitsha soYilo lwezixhobo
Enkosi ngegalelo, kujongeka kulunge kakhulu kuyilo lwezinto!
Wamkelekile, Miguel, bulisa !!!
Igcisa laseJapan lenza ubucwebe obukhuthazwe lulwandle ngendwangu eguqukayo